सिंगापुरबाट फर्किनासाथ ओली सक्रिय, नेताहरूसँग सामूहिक र छुट्टाछुट्टै छलफल
Tue, Nov 19, 2019 at 8:21pm
कर्णालीको पर्यटन विकासमा पूर्वाधार मुख्य बाधक #आहा खबर# इरानमा मूल्य वृद्धिको विरोधमा प्रदर्शन, दमनप्रति राष्ट्रसङ्घद्वारा चासो व्यक्त #आहा खबर# राजपालाई प्रधानमन्त्री ओलीले गरे यस्तो ‘अफर’ #आहा खबर# नमुना जिल्ला बनाउन गुरुयोजना बनाउँछौँ : शेरधन राई #आहा खबर# उपनिर्वाचन सार्थक सन्देश प्रवाह गर्ने अवसर : काँग्रेस #आहा खबर# मुलुक आर्थिक समृद्धितर्फ अग्रसर : प्रचण्ड #आहा खबर# युनाइटेड बहुउद्देश्यीय सहकारी समस्याग्रस्त घोषणा #आहा खबर# बझाङमा ५.७ रेक्टर स्केलको भूकम्प #आहा खबर# मन्त्रिपरिषद बैठकमै प्रधानमन्त्री ओलीले 'भोलि नयाँ मन्त्रीको सपथ हुन्छ' भनेपछि ... #आहा खबर# सबै सामुदायिक विद्यालयको सबलीकरण गरिन्छ : पौडेल #आहा खबर# जहदा गाउँपालिकाका वडाध्यक्ष साह घुससहित पक्राउ #आहा खबर# विकास र समृद्धिका लागि ढकाललाई अर्थमन्त्री बनाउँछौँ : नेता सापकोटा #आहा खबर# सोल्टी होटलले २६ प्रतिशत लाभांश दिने, शेयर लाभांश चुक्तापूँजीको १५ प्रतिशत #आहा खबर# ‘शीतलहरबाट कोही मर्नु नपरोस्’ #आहा खबर# विश्वकप छनोट : नेपाल कुवेतसँग झिनो अन्तरले स्तब्ध #आहा खबर#
बुधबार, २९ श्रावन २०७६,	आहाखबर	4.23K
प्रधानमन्त्री केपी ओलीले स्वदेश फर्केलगत्तै राजनीतिक भेटघाट तीव्र पारेका छन्। उपचारका लागि १० दिन सिंगापुर बसेर सोमबार फर्कनेबित्तिकै नेकपा अध्यक्षसमेत रहेका ओली सचिवालय बैठकको तयारीमा जुटेका हुन्। यस क्रममा उनले सचिवालय सदस्यहरूसँग सामूहिक र छुट्टाछुट्टै छलफल गरेका छन्।
प्रधानमन्त्री ओलीले सोमबार उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेल र महासचिव विष्णु पौडेलसँग बालुवाटारमा भेटघाट गरेका थिए। उनले पार्टीका अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसँग पनि भेटवार्ता गरेका थिए। ‘प्रधानमन्त्री आफ्नो दैनिक काममा सक्रिय भइसक्नुभएको छ। उहाँले स्वदेश फर्केलगत्तै राजनीतिक भेटघाट थालिसक्नुभएको छ,’ प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार डा. कुन्दन अर्यालले अन्नपूर्णसँग भने, ‘प्रधानमन्त्री फर्केलगत्तै उपप्रधानमन्त्री, पार्टी अध्यक्ष, महासचिवलगायत नेताहरूसँग भेटघाट गर्नुभएको छ। मंगलबार पनि बिहानैदेखि पार्टी नेताहरूसँग सचिवालय बैठकको गृहकार्यका लागि भेटघाट गर्नुभएको छ।’ सचिवालय बैठक बुधबार बस्दैछ।
प्रधानमन्त्री ओलीले अध्यक्ष दाहाल र महासचिव पौडेलसँग सोमबार नै छलफल गरी पूर्वनिर्धारित सचिवालय बैठक एक दिनपछि सारेर आन्तरिक गृहकार्यमा छलफल थालेका थिए।
‘पार्टी नेताहरूसँग उहाँले सचिवालय बैठकको तयारीका लागि छलफल गर्नुभएको छ,’ अर्यालले भने, ‘अधिकांश सचिवालयका सदस्यसँग प्रधानमन्त्रीले भेटेर छलफल गरिसक्नुभएको छ।’ ओलीले मंगलबार बिहान पूर्व एमालेका सचिवालय सदस्यहरू माधव नेपाल, झलनाथ खनाल, वामदेव गौतम, विष्णु पौडेल र ईश्वर पोखरेलसँग सामूहिक भेट गरे। दिउँसो अध्यक्ष दाहाल, रामबहादुर थापासँग महासचिव पौडेलसहित राखेर छलफल गरे। साँझ फेरि उनले संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्बाङ, परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीलगायत पूर्वएमालेका नेताहरूसँग छलफल गरे।
सरकारका मन्त्रीसमेत रहेका नेताहरूसँग सरकारको कामका विषयमा पनि उनले बिफ्रिङ लिएका छन्। यस्तै अन्य नेताहरुसँग भने पार्टीको कार्यविभाजन प्रस्तावका विषयमा छलफल गरेका समाचार अन्नपूर्णपोस्टमा छ ।
पार्टीका ३२ केन्द्रीय विभाग, एउटा नीति अध्ययन प्रतिष्ठान, उपत्यका विशेष प्रदेश, सम्पर्क कमिटी, प्रवास कमिटी र २२ वटा जनवर्गीय संगठनका फ्याक्सन इन्चार्जको जिम्मेवारीलगायतमा पार्टी नेताहरूको कार्य विभाजन बाँकी छ। ‘५ साउनमा जिल्ला इन्चार्ज÷सहइन्चार्जको टुंगो लगाएपछि विभागको जिम्मेवारी चयनको कार्यसूचीमा नेकपा सचिवालय बैठक प्रवेश गरेको हो। तर पार्टीको स्कुल विभागको नेतृत्वका लागि पार्टी सचिवालयका सदस्यहरू नारायणकाजी श्रेष्ठ र ईश्वर पोखरेल दुवैले दाबी नछोडेपछि नेतृत्वले विभागीय जिम्मेवारी टुंग्याउन सकेको छैन। १३ साउनको बैठकले महासचिव पौडेललाई कार्यविभाजन बाँकी रहेका नेताहरूसँग प्राथमिक सूचीका आधारमा रुचि बुझेर व्यवस्थित गर्न जिम्मेवारी दिएको थियो। त्यसपछि दुवै अध्यक्ष विदेश गएका थिए। दाहाल दुबई र ओली सिंगापुरबाट फर्केपछि महासचिव पौडेलले नेताहरूसँग छलफलका आधारमा तयार पारेको प्रस्ताव दुवै नेतालाई बुझाएका छन्।
प्रधानमन्त्री नहँुदा अध्यक्ष दाहालले पनि पार्टीका नेतासँग भेटघाट तीव्र बनाएका थिए। ओली नहुँदा दाहालले वरिष्ठ नेता माधव नेपालसँग दुईपटक, वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल, वामदेव गौतम, नारायणकाजी श्रेष्ठ, रामबहादुर थापा र महासचिव पौडेलसँग संवाद गरेका थिए।
नेकपाको नौ सदस्यीय सचिवालयमा प्रधानमन्त्री एवम् अध्यक्ष ओलीले सचिवालय सदस्य श्रेष्ठसँग छलफल गरेका छैनन् भने अध्यक्ष दाहालले नेता पोखरेलसँग छलफल गरेका छैनन्। दुवै नेताले स्कुल विभागको दाबी गरिरहेका छन्।
राजपालाई प्रधानमन्त्री ओलीले गरे यस्तो ‘अफर’
नमुना जिल्ला बनाउन गुरुयोजना बनाउँछौँ : शेरधन राई
उपनिर्वाचन सार्थक सन्देश प्रवाह गर्ने अवसर : काँग्रेस
सबै सामुदायिक विद्यालयको सबलीकरण गरिन्छ : पौडेल
जहदा गाउँपालिकाका वडाध्यक्ष साह घुससहित पक्राउ
‘शीतलहरबाट कोही मर्नु नपरोस्’
‘प्रधानमन्त्रीका गतिविधिलाई पारदर्शी ढङ्गले सूचना प्रवाह गर्ने’
सरकार ढिलो भएकै हो, अब विकासको लहर ल्याउँछ : प्रचण्ड
विद्यार्थी अमेरिका पठाउने मुलुकमध्ये १२ औँ स्थानमा नेपाल
मन्त्रिमण्डल हेरफेरबारे प्रचण्डको सचिवालयले निकाल्यो विज्ञप्ति
उपनिर्वाचन २०७६ : उम्मेदवारसँगै शीर्षनेता भोट माग्दै घरदैलोमा
सेना मृत्यु प्रकरण : ढकाललाई पाँच दिन हिरासतमा राखिने
सीमा विवाद चर्किंदै गर्दा भारतले पठायो श्यामशरण !
नेमकिपाका वडाध्यक्षको उम्मेदवारसहित अन्य नेता नेकपामा प्रवेश
बालुवाटारमा ओली-प्रचण्ड भेट : मन्‍त्रिपरिषद् पुनर्गठनका विषयमा निर्णायक छलफल
नेकपाको सरकारले सीमा सुरक्षित गर्ने ऐतिहासिक जिम्मेवारी पूरा गर्छ : पूर्वप्रधानमन्त्री खनाल
ओमानसँग सरकारले श्रम समझदारी गर्ने, के छन् प्रावधान ?
'वार रुम' बाटै गरे प्रधानमन्त्री ओलीले जलविद्युतको उद्घाटन
विदेश जाँदैहुनुहुन्छ ? यी कागजात नहुँदा अध्यागमनले दिँदैन अनुमति
ठमेलको नाइट क्लबमा पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहको नाच !